Kursiga armaajada ee Patchwork: fikrado, moodallo la iibsanayo iyo sida kor loogu qaado
Kursiga garabka ee loo yaqaan 'Patchwork'
Sida kor loogu qaado kursiga garabka ee Patchwork
Haddii aad haysato fadhiga fadhiga ama kursi cufan oo u baahan kor u qaadis wejiga, halkan waxaa ah casharro aad mar kale dib ugu soo celinayso midabada iyo naqshadaha aad rabto, adoo isticmaalaya farsamada qoqobo.
Ka saar maradii hore
Ka hor bilaabi kor u qaadida, waxaa habboon in dharka laga saaro kursiga. Gaar ahaan marka ay timaaddo mid hore u duugoobay ama xoogaa xidhan. Si tan loo sameeyo, waxaad isku hubayn kartaa dulqaadka sababtoo ah had iyo jeer ma aha hawl qaadanaysa waqti yar, laakiin taa lidkeeda. Waa in aan wax yar u soconaa si aysan u dhaawicin qaabka kursiga armaajada ama kursiga.
Haddii ay tahay gabal alaabta guriga ah oo qaar ka go'an tahay, laga yaabee in qaybta fadhiga, laga yaabo in la beddelo. Si tan loo sameeyo, waxaan abuuri karnaa saldhig cusub oo ah qaabka xumbo ama suufka haddii ay tahay fadhiga. Sidan oo kale, natiijada kama dambaysta ah ee our Kursi balastar ah ama kursi cufan waa wax ka badan dammaanad qaadka. Ka mid ah buuxinta waxaad dooran kartaa hoos ama caag xumbo, iyo kuwo kale.
Waa waqtigii la heli lahaa dharka. In kasta oo aan ka hadlayno fadhiga Patchwork, wax dhib ah nagama yeelan doono markan. Tan, waxaan u baahanahay inaan sameyno a ururinta qashinka. Halkan waxaan ku dooran karnaa kuwa aan ugu jecelnahay midabada ama qaababka. Kuraasta cudud ama cudud waxay u baahan karaan inta u dhaxaysa laba ilaa saddex mitir oo dhar ah, halka kuraasuhuna ay u baahan yihiin hal keliya.
Markaa, laga bilaabo tan, waa inaan samaynaa tiradaas dharka ah. Si taas loo sameeyo, waa in aan tolo hadhaagii aan gooyay ama afar geesood ama leydi. Marka hore laba laba ayaanu tolnaa, ka dibna waxaan isku dhejineynaa strips. Bir dhabarka maryaha, midigta tollayaasha, si ay uga caawiso inay soo galaan. Wax yar wax yar waxaad ku toli doontaa tolida tolida ilaa aad ka hesho gabal dhar ah oo dhamaystiran kursiga cudud.
Haddii aan hore u haysanay marada la diyaariyey oo la dhejiyay suufka, waxa hadhay waa in la dhamaystiro habka. Taas awgeed, waxaan u baahan doonaa qalab koronto ah. Ma iyada ayaa noqon doonta dharka si fiican u hagaaji kursiga. Laakiin ma aha oo kaliya, laakiin waa inaad dhejisaa dharka si adag. Waxaa habboon in la codsado caawimo si loo dedejiyo tallaabadan. Inta uu mid soo jiidayo marada, mid kale ayaa ka soo jiidaya! Iyada oo dharka la fidiyay, natiijadu waxay noqon doontaa mid weyn. Geesaha, laalaab marada oo waad dhammaysay.
Kursigu wuxuu ka koobnaan doonaa salkiisa, dhabarkiisa iyo cududihiisa. Waa hagaag, fikrad kale ayaa ah in mid kasta oo ka mid ah qaybahaas lagu daboolo dhar kala duwan. Si kale haddii loo dhigo, halkii aad ka samayn lahayd hal maro kursiga oo dhan, waxaad ku dhejin kartaa qaybo iyo maro kala duwan. Tani waxay mar horeba dhadhan u tahay qof walba.
Had iyo jeer xasuuso inaad isticmaasho dharkii hore. Xaaladdan oo kale, waxaan u isticmaali doonaa sida qaabka. Marka aan ka saarno, waxay naga caawin doontaa inaan cabbirno dharka cusub oo aan ogaanno inta aan u baahanahay iyo sidoo kale qaabkeeda. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si yar loo socdo marka dharka laga saarayo kursigii hore. Markaad bilawdo korkaynta, ku bilaw gabalkii u dambeeyay ee aad iska saartay. Had iyo jeer waxaan isticmaalnaa amarka gadaale. Tan iyo habkan, waxaan hubineynaa natiijo ka fiican.
Markaan haysano fadhigayada Patchwork, waa inaan faakiyuum todobaadkii hal mar. Inkasta oo haddii dharka aan ku dhejinay ay aad u jilicsan tahay, markaa boodhka ayaa noqon doona wax ka badan oo ku filan. Ujeedadu waa in aan ilaashano inta aan rabno.
Kursiga armaajada ee Patchwork
Hoos waxa aad haysataa sawir ballaadhan oo ah kuraasta armaajada iyo fadhiga fadhiga si aad fikrado u hesho. Dhammaan waxaad arki doontaan hoos waxaad ka iibsan kartaa halkan markaa haddii aad runtii jeceshahay mid, waxaad had iyo jeer dooran kartaa inaad iibsato mar hore la sameeyay oo iska ilaali habka kor u qaadida.
Haddii aad heli waydo mid ka mid ah moodooyinka aanu ku tusinay, faallo noogu dhaaf waxaanu kaa caawin doonaa raadinta.
Halkee laga iibsan karaa kuraasta garbaha ee Patchwork
korsaar a kursi yar iyo mid gaar ah ama kursi ma aha sidaas u adag. Laakiin runtu waxay tahay in wax ka weyn, ay u fiican tahay in la helo xirfadlayaal. Weli, haddii aadan rabin inaad naftaada dhibto, ma jiraan wax la mid ah iibsashada kuraasta gacmaha ee Patchwork oo diyaarsan.
Waa fikrad ku habboon qurxi geesaha gurigeena. Dhinaca kale, waxaad ka heli kartaa inta badan dukaamada alaabta guriga. Had iyo jeer waxaa jiri doona xulashooyin ku jira habab kala duwan oo aad ku dari karto inta ka hartay qurxintaada. Sababtoo ah waxay ku fiican yihiin alaabta guriga ee qolka fadhiga iyo qolalka jiifka ama qolalka martida.
Waa run in sidoo kale dukaamada alaabta guriga ee online noo ogolow inaan ku raaxaysanno moodooyinka cusub. Labaduba waxay ku fadhiyaan kuraasta armaajada iyo fadhiga gaarka ah ama kuraasta garabka ee waaweyn. Adduunka oo dhan midabka iyo asalka ayaa mahad leh qaabka Patchwork. Laakiin haddii aad rabto inaad u tagto tallaal go'an, waxaad sidoo kale ku yeelan doontaa fikrado fiican Amazon. Noocyo kala duwan, cabbirro iyo qaabab laakiin had iyo jeer leh taabashada asalka ah ee Patchwork ay bixiso.
Iibso - Kursiga garbaha ee loo yaqaan 'Patchwork'
Mashiinka dharka » Kursiga garabka ee loo yaqaan 'Patchwork'